Mifananidzo yeiyo iPhone 7 ine imwe dhizaini | IPhone nhau
Sezvo pasina chinhu chinosimbiswa kusvikira yapihwa zviri pamutemo, nhasi zvaonekwa mimwe mifananidzo mitsva iyo inofanirwa kunge ichibva kune iyo iPhone 7 kesi. Iyi mifanikiso mitsva inobva kumugadziri weItari wekushandisa uye inoratidza mabhendi eantenna ayo anonetsa kuona, asi chinzvimbo chavo chinoenderana nekudonha kwakapfuura. Nzvimbo uye saizi yekamera inoenderanawo nezvatakaona kusvika parizvino, asi pane maviri akakosha misiyano
Kutanga, iyo iPhone yaizopfeka iyi kesi yaona sei kupenya Tone True yapfuura kubva kurudyi rwekhamera kuenda pasi. Semaonero angu, shanduko iyi haigadzirise kana kukuvadza dhizaini rekuseri kweiyo iPhone zvakanyanya, asi kubva pakuona kwe "Apple kufunga", hapana chinoita kuti tifunge kuti vari kuzoisa mwenje munzvimbo iyoyo ( kunyangwe vashoma vedu isu taizofungidzira kuti vaizovhura a Smart Bhatiri Nyaya zvakashata seyavakaburitsa, handiti?).
iPhone 7 ine 4 masipika uye kupenya pasi pekamera
Asi, seizvo Steve anobva kuNoWhereElse anotiudza, uyo anotarisa zvese uye anowana chero kukanganisa, pane dambudziko rekuti iyi kesi ishandiswe muiyo iPhone 7 ichaunzwa munaGunyana: sezvaungaona mumufananidzo wapfuura, chikamu che mutauri angave ari kumusoro kurudyi kana tikatarisa iyo iPhone kubva kumberi yaizove pamusoro pekamera chaipo. Tichifunga nezve diki nzvimbo iripo pakati pekuvhura kamera uye bezel yenyaya, zvinoita kunge zvisingaite kuti iyi iPhone ichaona mwenje wezuva.
Ndingadai ndaifarira iyo iPhone 7 kuve nematauri maviri, asi izvo zvataurwa naSteve iye (aka OnLeaks) zvakaburitsa zvinoratidza kuti inotevera Apple smartphone ichengete iyo mutauri mumwe chete iyo yanga iripo kubvira iyo yekutanga iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo yeiyo iPhone 7 ine imwe dhizaini: ina masipika
Kupenya pasi pekamera? Ndinovimba kwete ... zvinoita kunge zvinotyisa! Izvo chaizvo Android ...
Asi nekutenderera musoro kwatakapihwa naApple nguva pfupi yadarika, ini handizoshamiswa kana ...
Mufananidzo wacho unotaridzika zvakanaka asi ini handidi kuzvitenda
4 vatauri? chii tekinoroji chakatimirira ... hahaha
4 vatauri? Zvinonakidza sei, kuti choni iise mimhanzi kumusoro kwepasi pevhu, bhazi uye renfe!
Inotaridzika kunge iPod touch nyowani
Aya ndiwo mashandiro anoita mbiri kamera ye iPhone 7 Plus